Nooglutyl အမှုန့် (112193-35-8) ထုတ်လုပ်သူများ - Phcoker Chemical
Nooglutyl အမှုန့်သည်ထူးခြားသောမှတ်ဥာဏ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းရန်အတွက်အကျိုးကျေးဇူးများပေးသောအသစ်သော nootropic ဖြစ်သည်။ ဒီ nootropic ၏ half-life သည် ...... ..
ကုန်ကြမ်း Nooglutyl အမှုန့် (112193-35-8) ကဗီဒီယို
ကုန်ကြမ်း Nooglutyl အမှုန့် (112193-35-8) ဖျေါပွခကျြ
ကုန်ကြမ်း Nooglutyl အမှုန့်သတိမေ့ခြင်းများအတွက်အလားအလာကုသမှုအဖြစ်ဆေးဝါးဗေဒ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံရုရှားအကယ်ဒမီ၏သုတေသနအင်စတီကျုမှာလေ့လာခဲ့သော nootropic အေးဂျင့်သည်။ တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှာ, ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်သက်ရောက်မှုအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
ကုန်ကြမ်း Nooglutyl အမှုန့် (112193-35-8) S ကpecifications
ထုတ်ကုန်အမည် ကုန်ကြမ်း Nooglutyl အမှုန့်
ဓာတုအမည် Nooglutil; ONK-10; UNII-09UM5JOS3W; BRN 4200454; 09UM5JOS3W; N-5- (Hydroxynicotinoyl) -l-glutamic အက်ဆစ်ပိုမို…
အမှတ်တံဆိပ် NAmE Nooglutil
CAS အရေအတွက် 112193-35-8
InChIKey XFZGYOJFPGPYCS-QMMMGPOBSA-N ကို
မော်လီကျူး Formula C11H12N2O6
မော်လီကျူး Wရှစ် 268.225 ဂရမ်
Monoisotopic Mass 268.23 ဂရမ် / mol
ရေဆူမှတ် 704.7 mmHg မှာကို C ° 60.0 ± 760
ဇီဝဗေဒတစ်ဝက်-ဘဝ 30 နာရီ3မိနစ်
Application ကုန်ကြမ်း Nooglutyl အမှုန့်အချို့ထူးချွန်မှတ်ဉာဏ် retention ကိုနှင့်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုကမ်းလှမ်းတဲ့အသစ်များ nootropic ဖြစ်ပါတယ်။
Nooglutyl အမှုန့် amnesia.In တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များများအတွက်အလားအလာကုသမှုအဖြစ်ဆေးဝါးဗေဒ၏သုတေသနအင်စတီကျုမှာလေ့လာခဲ့ခံရနေတဲ့ nootropic အေးဂျင့်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံရုရှားအကယ်ဒမီဖြစ်ပါသည်, ကဗဟိုအာရုံကြောစနစ်သက်ရောက်မှုအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
Nooglutyl, glutamatergic သက်ရောက်မှုရှိကြောင်း, L-အချိုမှုများနှင့် oxynicotinic အက်ဆစ်တစ်ဆင်းသက်လာ, ischemic အာရုံခံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ဦးနှောက်ဒဏ်ရာဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်, memory နဲ့သင်ယူမှု၏နှောင့်အယှက်ကုသတစ်အလွန်အမင်းတက်ကြွမူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။
Nooglutyl အမှုန့် (112193-35-8လှုပ်ရှားမှု၏) ယန္တရား?
ကြွက်အပေါ်စမ်းသပ်ချက် nooglutyl ပြပွဲ vestibular-အကာအကွယ်ဂုဏ်သတ္တိများအသံထွက်နှင့်၎င်း၏ antimotion လှုပ်ရှားမှုအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သော scopolamine နှင့် diprazine အဖြစ်ဂန္ vestibular ကာကွယ်အောက်တွင်အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်မထားဘူးကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ somatosensory ဇုန်၏တစ်ခုတည်းသောယူနစ်လှုပ်ရှားမှု activation ငါနှင့်၏တားစီး: ကြောင်အပေါ် Electrophysiological စမ်းသပ်ချက် nooglutyl cortical အာရုံခံ၏ 80% အတွက်အလိုအလျောက်လှုပ်ရှားမှုပွောငျးလဲ (somatosensory ဇုန်ငါနှင့် parietal အသင်းအဖွဲ့ cortex ၏ဧရိယာ 5) နှင့်သိသိသာသာရွေ့လျားမှုအနာရောဂါကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများအားနည်းနေခြင်းကြောင့်ပြသ somatic ဆွဖို့အာရုံခံဆဲလျတုံ့ပြန်မှု။ ပြင်ဆင်မှု၏ဤပိုင်ဆိုင်မှုသည်၎င်း၏ antimotion အကျိုးသက်ရောက်မှု၏အခြေခံဖွဲ့စည်းယုံကြည်နေသည်။
Nooglutyl တစ် racetam များ၏အာရုံကြောရှုထောင့်နှင့်အတူတစ်ဦး ampakine လှုံ့ဆော်၏ပုံမှန်, ရွေးချယ် AMPA receptors modulate ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ Noopept ထက်အချိုမှု receptors အပေါ်တစ်ဦးပိုမိုအားကောင်းသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့သရုပ်ပြခဲ့သည်။
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား of Nooglutyl အမှုန့် (112193-35-8)
မှတ်ဉာဏ်ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့် retention အဘို့ သာ. ကောင်း၏
Nooglutyl အမှုန့်ထိရောက်သောနှင့်အစွမ်းထက် nootropic ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသည်။ Nooglutyl မှတ်ဉာဏ်ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းအပေါ်အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့စောင့်ကြည့်လေ့လာ, ထိုသို့ကိုလည်းဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များ၏သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များအများစုတိုးတက်စေရန်တတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုလည်း antiamnesic နှင့် antihypoxic စွမ်းရည်ခဲ့ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။
အကြံပြုထားသည် Nooglutyl အမှုန့် (112193-35-8) သောက်သုံးသော
သေးလူ့အပေါ်သောက်သုံးသောအကြံပြု, ဒါပေမယ့် 20 တစ်ထိုးအတွက် Nooglutyl အမှုန့်ကီလို9လဟောင်းများကို SAMP10 mice. ၏အပြုအမူနှင့်မှတ်ဉာဏ်အပေါ်အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ် / MG မရှိပါ
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး of Nooglutyl အမှုန့် (112193-35-8)